Acid-base munyu wevasungwa Transmitter Vagadziri & Vatengesi - China Acid-base munyu wevasungwa Transmitter Fekitori
Electrodeless conductivity sensor inogadzira yazvino mune yakavharwa chiuno chemhinduro, uyezve kuyera iyo yazvino kuyera kuitisa kwemhinduro. Iyo sensor yekudhiraivha inotyaira iyo coil A, iyo inokonzeresa kuchinjika ikozvino mune mhinduro; coil B inoona iyo inokonzereswa yazvino, inoenderana nekuitisa kwesarudzo. Iyo yekudzivirira sensor inoitisa ichi chiratidzo uye inoratidza inoenderana kuverenga.
Pa-mutsetse Acid, Alkali uye Munyu Yekusungwa Meter Electromagnetic Conductivity Rinofambisa T6038
Maindasitiri pa-line yemhando yemvura kuongorora uye kudzora chishandiso ne microprocessor. Chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya musimba rinopisa, makemikari indasitiri, simbi yekuchera uye mamwe maindasitiri, sekumutswazve kweion kuchinjana resin musimba remagetsi, makemikari indasitiri maitiro, nezvimwewo, kuenderera mberi nekuona uye kudzora kusungwa kwemakemikari acid kana alkali mune aqueous mhinduro.
Pa-mutsetse Acid uye Alkali Munyu Yekusungwa Meter T6036
Maindasitiri epamhepo conduction mita ndeye microprocessor-yakavakirwa mhando yemvura online yekutarisa yekudzora chishandiso, iyo salinometer matanho uye anotarisira iyo munyu (munyu zvemukati) neiyo conductivity kuyerwa mumvura yakachena. Iko kukosha kwakayerwa kunoratidzwa sepesenti uye nekuenzanisa iyo yakayerwa kukosha kune mushandisi yakatsanangurwa alarm yakatarwa poindi kukosha, zviyero zvekutumira zviripo kuratidza kana munyu uri pamusoro kana pazasi peiyo alarm yakatarwa poindi kukosha.
Ph Sensor Electrode, Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Chlorophyll Sensor, Kufambisa TDS Sensor, Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu, Titanium Alloy Kuitisa Shungu,